Sawirro:-Booliska Garowe oo soo bandhigay maandooriyaal iyo agabka wax lagu dilo – Hornafrik Media Network
Taliska Booliska Puntland qeybtiisa gobolka Nugaal ayaa saakay oo Sabti ah soo bandhigay maandooriye iskugu jira Khamri, Xashiish iyo sidoo kale agab kale ay ku jiraan toorayo iyo ulo, kuwaas oo ay la sheegay in loo adeegsa jira dhaca iyo furashada dadka shacabka ah loogu geysto magaalada Garowe.
Saraakiisha Booliiska ayaa sheegay, in hawlgallo ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Garowe ay ku soo qabteen dhalinyaro kooxo u abaabulan oo dhibaato dhac iyo furasho u gaysan jiray dadka shacab ah, kuwaasi oo inta badan adeegsada maandooriyaal halis ah sida khamriga iyo Xashiishka.
Sidoo kale saraakiisha ayaa warbaahinta u sheegay in dadka lagu soo qabtay falalkas ay ku jiraan ganacsato caan ah khamriga iyo xashiishka si dhuumaaleysi ah u soo gali jiray magaalada Muqdisho.
Taliyaha booliska ayaa digniin adag u diray dadka ka ganacsatada ah ee uu sheegay inay ku lug leeyihiin maandooriyaha lasoo galiyo magaalada, isagoo ugu hanjabay in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo falalkaasi lagu soo qabto.
Dibadbax maanta ka socda qeybo ka mid ah Muqdisho